Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo kormeer ku tagay Dugsiga hoose/ dhaxe Maxamud Aw Cismaan ee Degmada Garowe. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ April 3, 2018
4/April/ 2018- Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ayaa ayaa kormeer howleed ku tegay goobaha Waxbarashada ee ku yaala magaalada Garowe ee xarunta Gobolka Nugaal .
Maamulaha cusub oo dhawaan la soo magacabay Liibaan Maxamed Maxamud Baafe ayaa uga War baxiyey iskuulka Xaladihiisa Waxbarasho Wasiirka.
Dugsiga Hoose/dhaxe Maxamud Aw cismaan ayaa ka mid aha iskuuladii qadiimiga ahaa ee Garowe, isgoo Magacii iskuulka hore la oranjiray Dugsiga Hoose/ dhaxe ee Garowe.
Prof Abshir Yuusuf Aw ciise Wasiirka Waxbarashada Puntland oo ay wehliyaan mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda ayaa mid mid u booqday fasalada goobaha Waxbarasho ee uu tegay, iyadoo ujeedka kormeerka ay ahayd u guur gelidda adeegyada Waxbarasho ee ka jirta deegaannada Dowlada Puntland.
Wasiirka ayaa baahiyadooda gaarkaa ee dhanka adeegyada Waxbarshada uga waramay qaar ka mida maamulaha dugsiyada hoose dhaxe Maxamud Aw Cismaan , kuwaasi oo dalbaday in dhinacyo badan laga taageero.
Dhanka kalana Wasiirka oo la hadlay ardaydii wax ka baranaysay goobaha uu kormeerka ku tagay ayaa ku booriyay ardaydu in ay sii laba laabaan dadaalkooda Waxbarsho, isagoo dhanka kalena ka dhawaajiyay in Wasaaradda Waxbarashada Puntland ay deeqo Waxbarasho oo dalka dibadiisa uga faa’iideyn doonto ardayda kaalimaha hore ka gasha imtixaanaadka mideysan ee Dugsiyada dhaxe iyo dugsiyada sare ee Dalka.
Liibaan Maxamed Maxamud Baafo ayaa isbadal fiican ku sameeyey iskuulkai isagoo khibrad dheer ulahaa Maamulka Waxbarasho , iskuuulka Dugsiga hoose/dhaxe Maxamud aw cismaan ayaa waxaa ka muuqaday Maamul,macalimiin iyo Arday wanaagsan.
Hoose Ka Daawo Sawiradda.